Obbo Mohammed Abdii Umar harra yeroo to'annaa jala oolfaman
Yeroo dheeraa dhaaf naanoo bulchiinsa Somaalee Itiyoophiyaa keessatti hanqinni bulchiinsa gaarii sadarkaa ol aanaa dhaan himatamaa ture kan jedhan komiishinerrri komiishina poolisii Federaalaa Obbo Zeeyinuu Jamaal VOAf ibsaniiru.
Akkuma kanaan prezidaantiin bulchiinsa naannoo Somalee duraanii obbo Mohammed Abdii Umarii har’a to’annaa jala kan oolan magaalaa Finfinnee naannoo Atlaas jedhamu kan jiru mana jireenya isaanii keessaa-tti ture.
Manni marii bulchiinsa naannoo Somaalee walgahii hatattamaa kaleessa gaggeesseen Obbo Abdiin akka hin himatamneef mirga qaban irraa mulqee jira.Prezidaanticha alattis aangawoonni 6 akka hin himatamneef mirga qabaataa turan irraa kaasee jira.
Manni marii bulchiinsa naannoo Somaalee tarkaanfii kana kan fudhate jeeqamsa naannoo sana keessatti gaggeeffamaa ture waliin wal qabatee yakka hojjatamee shakkamanii ta’uun ibsamee jira.
Keessumaa Muummichi ministeeraa Abiy Ahimed erga aangootti dhufanii as biyyattii keessatti geggeessamaa kan jiru ajendaa jijjiiramaa keessatti naannoon Somaalee akka haammatamu mootummaan hojjetaa kan ture ennaa tu’u uumamtichi kaka’umsa ofii isaatiin fedhii mul’isuus bulchiinsichi garuu tole hin jedhin hafe jedhan komiishinerri komiishina poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa Zeeyinuu Jamaal.
Jijjiiramni Itiyoophiyaa Keessaa Jajjabeessaa Dha: Miseensota Kongresii Ameerikaa